The more I breath, the more i break
I eradicated all of the isolation phobia
Still i breath on truth :::
Slowly .....but surely I'm walking around in my circle ,
While I quietly prey
: I abandon this suffering with continuous living :
Posted by Sunday Music at 12:40 PM
"ဒေါက် ... ဒေါက်"
ကျွန်တော် တံခါးခေါက်လိုက်တော့ အာခိမိဒိက အထဲက ပြန်အော်တယ်
"တံခါးတပ်မထားဘူး" . . . ။
လောကတွင် ဟုတ်သယောင် ထင်နေရသည့် အရာများသာလွှမ်းမိုးနေသည်
စကားလုံးများက အသိဥာဏ်ကို ကန့် သတ်ထားဆဲ
ဖဲထုတ်တိုင်း ၅၁ ချပ်နဲ့ ငါးရှဉ့် တစ်ကောင် ချည်း ။
မဟာ လူသားဝါဒကို ခဏလောက် ခေါက်ထားကြည့်လိုက်ပါ
မျဉ်းဖြောင့်တစ်ကြောင်းရဲ့ ပတ်လည်အနားမှာ လျှောက်ပြေးသံပာာ
နတ်ဆိုးတွေ ဗုံတီးသလို ညံလို့ ။
လောကထဲမှာ လမ်းလျှောက်နေသောသင်္ချိုင်းမှတ်တိုင်များကို လူပာုခေါ်သော်
တံခါးခေါက်သံအပြီးမှာ အိမ်မက်တို့ အရေခွံကျွတ်ပြီးပါသွားခဲ့ ။
သေမင်းရဲ့ လက်ဖ၀ါးမှာ အသက်လမ်းကြောင်းပါသလား ... ။
ပန်းပုရုပ်တွေကလည်း အရေပြားတွေ တွဲကျလို့ 
ပြက္ခဒိန်ကို လှည့်ကြည့်ပြီးမှ ဒီရယ်သံပာာ အင်္ဂါသံလို့ သိရတယ် ။
၀ရုန်းသုန်းကား လိမ့်ဆင်းသွားတဲ့ ကျွန်တော်ပာာ ကျောက်တုံးတွေအောက်ပိလို့ ။
အာခိမိဒိ ဘယ်လိုသေသွားတယ်ဆိုတာ ခင်ဗျားတို့ အမြင်ပဲ
အိပ်ရေးပျက်တက်သော "နိဗ္ဗာန်" ဆီသို့. . . တနင်္ဂနွေ ဂီတ (31/3/2012)
Posted by Sunday Music at 8:12 AM
ပီပီသသလည်း မဟုတ်သေးပါဘူး ... ။
ကိုယ့်အကြောင်းကိုယ် လုလုပြောတတ်တဲ့ လူတွေနဲ့
ခဏခဏ ကြုံတက်လွန်းလို့...
နင်မမြင်သာတဲ့ ဒဏ်ရာတွေရခဲ့ဖူးပါရဲ့.... ။
အကွက်ချပုံများ .. စေ့စပ်လွန်းတယ်
င့ါကုတင် ရွှေ့ ထားရင်ကောင်းမလား ...
အက်စပရင်အပြားကို လရောင်နဲ့ ရောပြီး
သွေးကြောထဲ သွင်းမယ် ။
မင်းရောငါရော သွေးလန့် ခဲ့ရလို့ 
မြေကြီးထဲ မြုပ်နေတဲ့ ပုလင်းခွံတွေ
ကမ္ဘာတစ်ခြမ်းမှာ ငါ့ပာာငါ ( မှောင် ) လို့ 
အစာမှန်မှန် မစားဖြစ်တာ မှားလား
ပန်းကန်စင်ပေါ်က ဖုန်တက်နေတဲ့ ဇွန်းက
ငါ့ကို လှောင်တယ် ...
ဗီတာမင် စီ ထက်ပိုချိုတယ် ။
ဂျီကျတဲ့ ဗီဇကို ဖြည်ချ ကြည့် တော့
မပီသတဲ့ ဂီတသံတွေချည်း အမြစ်တွယ်နေ
ဖျားနေတဲ့ ခိုအိုကြီးလိုပဲ ...
ငါ့လျှာပေါ် လာနားတဲ့ အနုပညာကို
ဖြည်းဖြည်းလေး အရသာခံမလို့...
့မြက်ဖိနပ်နဲ့ငါလိုက်ခဲ့မယ် ။
င့ါကိုယ်ထဲက ရေဒီယိုသတ္တိတွေ ကြွေတဲ့ည ဖြစ်လို့ပေါ့။
နတ်ဝှက်ထားတဲ့ ပန်းသီး ...
ဘယ်သူမှမတွေ့ ခင် ပုတ်နေပြီ
သူဆိုဆိုနေကျ အသံအောကြီးနဲ့ 
အာမင် အသံထွက် မှားနေတယ်လို့။
နှလုံးသားထဲကို ရေမသွန်ပါနဲ့။
ကောင်ကင်ထိ မရောက်မှတော့ ဘာလုပ်မှာလဲ
"ကျွန်မ" ဖြစ်ပြီ တဲ့ ။
သူ့ ရဲ့ ညနေခင်းကို ခဏလောက် ဖြူပေးလိုက်စမ်းပါ ဘုရားသခင် ...
Posted by Sunday Music at 2:45 PM
တစ်ဆို့ နေတဲ့ ငိုရှိုက်သံတွေ
မအိပ်တဲ့နာရီစင်ထဲကို စီးဝင်ပျောက်သွားလို့။
တအအ နဲ့ လည်ချောင်းထဲတစ်ဆို့ နေတဲ့ အနာဂတ်တွေ
ကြေးစည်သံ လည်းမကယ်နိူင်တော့ ။
“ဟဲ့…အကန်း ..လမ်းကဒီမှာ ” လို့မီးထိုးပြတဲ့
သေမင်းနောက်ကို လတ်မှတ်လေး ကိုင်စောင့်
မျက်မှောင်ကုတ်ကုတ် ဒီရုပ်ကို သင်
မြင်ရင် မှတ်မိနိုင်စွမ်းမရှိပါ ။
ညလယ် လေအဝှေ့ 
ည ည အိပ်မပျော်ဘူးအမေ
မနက်ဖြန် မနက် ရေချိုးချင်သေးတယ်
ပေါင်ချိန်စက်ပေါ် တက်ရပ်ကြည့် တော့
၁၆ နှစ်သား အလေးချိန်နဲ့မတိမ်းမယိမ်း
အကြွေးစာရင်း အရှုပ်အရှင်းစဉ်းစားနေလေရဲ့ 
ကုတင်အောက်က ထွေးခံကလည်း ယင်ကောင်တို့ ရဲ့ ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲ
ဒီလိုနဲ့ ပဲ ...
နားထဲလည်း ဘာမှ မကြားတော့
မျက်လုံးထဲလည်း ဘာမှ မမြင်တော့
ငါ့ရဲ့ ခရီး ငါဆက်တော့မည်
အားလုံးကိုချော့ငါလျော့ တော့မည်
ငါသေသွားသော် ငါ၏သန္ဓေ ဂူမသွင်းနှင့်
ငါသေသွားသော် ငါ၏အရိုး ပြာမစုနှင့်
ငါ၏ကိုယ်ကို မှိုင်းငွေ့ တိုက်၍
လေထဲသို့ သာ လွှင့်ပါလေ ...
Posted by Sunday Music at 3:13 AM
ကမ္ဘာဦးအစ ဧဝကိုက်ခဲ့သော ပန်းသီးသည် ချိုမည်ထင်သလော
နယူတန်ခေါင်းပေါ် ပြုတ်ကျခဲ့သော ပန်းသီးသည် ကြီးမည်ထင်သလော
စတိဂျော့လက်ပေါ် မွေးလာသော ပန်းသီးသည် စားလို့ ရမည်ထင်သလော
ကျွန်န်ုပ် မငြင်းလို ။
စနိုးဝှိုက် စားနေသော ပန်းသီးကိုတော့ ကျွန်န်ုပ် မစားလိုပါ။
ထိုအသီးသည် အဆိပ်ရည် စိမ်ထားကြောင်း သိနေသောကြောင့် ဖြစ်၏။
တစ်ခါက ပာစ်တလာ၏ အမိန့် သည် လူပေါင်းများစွာ သေခဲ့ဖူးသည်
တစ်ခါက အိုင်းစတိုင်း၏ နူတ်ခမ်းမွှေးသည် မည်းနက်ခဲ့ဖူးသည်
ထိုအိုင်းစတိုင်း၏ အနုမြူဗုံး ပုံသေနည်းသာ ပာစ်တလာ၏ လက်ထဲရောက်ခဲ့လျှင်
မည်းနက်နေသော နူတ်ခမ်းမွှေးနှင့်လူများလည်း သေစေနိူင်သည် ။
ဂျူးလူမျိူးများခင်းပေးသော သွေးလမ်းပေါ်တွင် ကားမောင်းချင်သည်
သမုဒ္ဒရာထဲရှိ လိပ်များကို အာကာသသို့ လိုက်ပို့ ချင်သည်
ပယ်နယ်တီဘောလုံးကို ဒေးဗစ်ဘက်ခမ်းအား ကန်စေချင်သည်
မြေခွေးတို့လှမ်းမမီသည့် စပျစ်သီးနှင့် ချက်သော ဝိုင်ကိုသောက်ချင်သည်
နေထွက်လာမည့်ညတညကို မြင်ဖူးချင်သည်
စကြဝဠာကို အမဲလိုက်ခဲ့သော ဘီးတပ်ကုလားထိုင်ပေါ်က မဟာပေါက်ကွဲမှု သီအိုရီကို ကျွန်တော် ကြိုက်၏။
ခပ်ညံ့ညံ့လူများ၏ မုန်းတီးမှုကို ကျွန်တော်ကြိုက်၏။ (ဆားနည်းနည်းတော့ ဖြူးရပါသည်။)
နွားတချို့ခံတွင်းမြိန်ရန်အတွက် မြက်များကို ချော့ကလက် ဆမ်းပေးရန် မလိုပါ။
ဆပ်ပြာပူဖောင်းကို ပုဆိန်ဖြင့် ပေါက်ရန် ကျွန်န်ုပ် အားမထုတ်
လူဆိုသည်မှာ ခြေထောက်နှင့်သာ လမ်းလျှောက်ရ၏။
အနုပညာရူးများကို ဒလသို့ ပို့လိုက်ပါ။
ထွေးခံအပေါက် တစ်လုံးကို ခေါင်းတွင်ဆောင်းကာ သရဖူဟု ကြွေးကြော်နေသူ အရူးအား
စာရေးဆရာဟု ဘာကြောင့် ခေါ်ကြသနည်း။
ဟို ကဗျာဆရာ၏ ဦးခေါင်းခွံကို အမှိုက်ခြင်း လုပ်ချင်ပါသည်။
အနုပညာအတု ထုတ်လုပ်ခြင်းသည် တင်အတု တပ်ဆင်ခြင်းထက် အပြစ်ကြီး၏။
မြန်မာပြည်၌ မထွက်သော အရာမှာ ယူရေနီယမ်နှင့် ကဗျာဆရာဖြစ်သည်။
ကျွန်န်ုပ်သည် အင်းဂလေ့ခ်ျလို အနည်းအကျဉ်း တတ်၏။
စော်ကားပေါင်းများလို့တက္ကသိုလ် ပထမနှစ် တစ်ဖုန်းဖုန်းကျဘူးသည်
ပန်းနုရောင်တောင် မသမ်းတဲ့ချစ်သူရဲ့ တံတွေးတစ်စက်ကိုလည်း လွမ်းသည်
မကျက်တကျက် ကြော်စားရန် ကြက်ဥတစ်လုံးကို ခွဲလိုက်သောအခါ အထဲမှ နဂါးတစ်ကောင် ထွက်လာလေသည်။
ထိုနဂါးသည် မြို့ မငြိမ်း သီချင်းကို မဆိုတတ်ချေ။
မနက်က ဓါတ်ဆီဈေး ၂၀၀ တက်သွားသည်
မနက်က မနက်စာ ငတ်သွားသည်
အရင်က တွတ်ပီကို အားကျသည်
အရင်က မိုက်ကယ်ဂျက်ဆင်ကို ဆဲဖူးသည်
အရင်က မိုနာလီဇာကို ကြိုက်ဖူးသည်
ဂန္တဝင် စာအုပ်စင်ထဲမှ ထွက်လာသော ပိုးဟပ်တစ်ကောင်၏ လေချဉ်တက်သံကို နားထောင်မနေကြပါနဲ့ 
ဂျက်စတင်ဘီဘာ၏ အသံလား၊ ကက်ဆက် ခလုတ် ပိတ်လိုက်ပါ။ ယနေ့မေတ္ထာသုတ်ကျက်ရန် အလုပ်ရှိသည်။
့ပြာခွက်မတွေ့မီးချစ်မရှိ
ပဲပြုတ်နဲ့နံပြားရရင် စားချင်သည်
နတ်ကနား ပွဲများ မုန်းသည်
အာဒံ နှင့် နေရာချင်းလဲချင်သည်
ဧဝ ကို အိုင်းစတိုင်းနှင့် ပေးစားလိုက်ပါ
စိန်စီသောည ထက် သာယာပေလိမ့်မည်
ရာဇ၀င်များကို ခဲဖျက်နှင့် ဖျက်ချင်သည်
ပြန်ရေးဖို့ခဲတံရှာမတွေ့ ။
ဂန္တဝင် စာအုပ်စင်ထဲမှ ထွက်လာသော ပိုးဟပ်တစ်ကောင်၏ လေချဉ်တက်သံကို နားထောင်မနေကြပါနဲ့။
( 14/2/2012 )
Posted by Sunday Music at 11:45 AM
လွတ်လပ်သည် ထင်သော ငှက်များကို လေပာာနယ်ကထိန်းချုပ်ထားပါသည်
ရွှင်မြူးသည် ထင်သော ငါးများကို ရေထုကထိန်းချုပ်ထားပါသည်
လူသားတို့ ကို အဘယ်က ထိန်းချုပ်ထားပါနည်း ။
အတောင်ပံမပါသောပုခုံးများနှင့် ပါးပာပ်မပါသောနှာခေါင်းတို့ သည်
မြေနီလမ်းတွင်ပျော်သော တာယာဖိနပ် နှင့်
ရှူးဖိနပ်ထဲတွင်ပျော်သောခြေအိတ် တို့ သည်
ကော်ဖီမကြိုက်သောသူ (နှင့်) သည်းခံခြင်းကို မကြိုက်သောသူ
သေမင်းကိုအရွဲ့တိုက်သူ (နှင့်) ဘုရားမရှိခိုးသောသူ
မည်သူက ငရဲပိုကျမည်နည်း ။
လုံခြူံမှုမရှိသော ထီးတစ်လက်သည် ခံတွင်းပျက်နေသော မိုးခါးရေများကို လှိုက်လှဲစွာကြိူဆိုကြသည် ။
ကိုရွှေဖားများသည် မီးစက်သံထက် ကျယ်လောင်သော မိုးချိန်းသံတို့ တွင် သာယာနာပျော်ကြသည် ။
လမ်းမီးတိုင်အောက်တွင် လဲနေသော အရက်ပုလင်းခွံသည် အာရုံဆွမ်းကြွသော သံဃာတော်များအတွက် ခလုတ်ကသင်းဖြစ်စေသည် ။
ကတ္တရာဒဏ် အလူးအလဲခံနေရသော ကားတာယာတို့ သည် မြက်ခင်းစိမ်းများကို ချစ်ခင်ကြသည် ။
ပဲပြုတ်သည်ကို အဖော်လုပ်ပေးသော အုံးမောင်း တုံးခေါက်သံသည် သူမ၏စားဝတ်နေရေး ခေါင်းလောင်းကိုပါ စည်းချက်လိုက်နေသည် ။
ဆေးရုံကုတင်ပေါ်ရှိ လူနာအတွက် ပေါင်မုန့် တစ်ချပ် နိူ့ တစ်ခွက် က နတ်သုဒ္ဓာ ဖြစ်နိူင်သည် ။
ဆရာ/မ များထက် တက္ကသိုလ်ကျောင်းတွင်း ဈေးဆိုင်ဖွင့်သူများက ကျောင်းသူ/သား များကို ပိုမျှော်လင့်ကြသည် ။
ညနေစောင်းလျှင် ချောင်သော ဘတ်စ်ကားများကို နေ့ စားအလုပ်သမာများက တောင့်တကြသည် ။
စည်းရှိကမ်းရှိနှင့် အမှိုက်များကို အမှိုက်ပုံးထဲတွင်သာပြစ်ရန် အမှိုက်လှည်းဝန်ထမ်းများက လိုလားကြသည်
ညနေ3နာရီ မူကြိုကျောင်းဆင်းချိန်ကို ကလေးမိဘများထက် ရေခဲချောင်းရောင်းသူများက ပိုမျှော်ကိုးကြသည် ။
အချို့ သောအရာများကို သက်ဆိုင်သူ ထက် မျှော်လင့်သူများက ပိုတန်ဖိုးထားတက်ကြသည် ။
အရက်ဆိုင်များတွင် လူပြည့် ကြပ်နေပြီး ဘုန်းကြီးကျောင်းများတွင် ဝေရာဝစ္စလုပ်ပေးမည့် သူ ရှားပါးနေဆဲ
မော်ဒန်မများကို စပွန်ဆာပေးကြမည့် လူ များနေပြီး ကျောင်းဆက်တက်ရန်အခက်အခဲရှိသူ ကလေးများကို ထောက်ပံ့မည့် သူ ရှားပါးနေဆဲပင်
ကောင်းသောစိတ်ဖြင့် လည်ပတ်နေသော နှလုံးခုန်သံတို့ ကို အကုသိုလ် အင်ဂျင်သံများက ဖုံးလွှမ်းနေကြသည် ။
နေရာ အလွဲအချော်များအတွက် တည့် မတ်ပေးနိူင်သော တက်ကျွမ်းသည့်ပုဂ္ဂိုလ်များကိုလည်း ဆက်လက်ရှာဖွေနေဆဲ
ငါးတို့ သည် တောင်ထိပ်ရောက်နေကြသည် ။
သိန်းငှက်တို့ သည် ငါးဖမ်းပိုက်ကွန်တွင် ငြိနေကြသည် ။
အဆင်ပြေအောင် ဘက်လှည့် ပေးမည့် သူမရှိ
မျှော်လင့်သူကိုယ်တိုင်ပင် တောင်ထိပ် ( သို့) ငါးဖမ်းပိုက်ကွန် တစ်နေရာရာတွင် လူမမြင်သူမမြင် ရှိနေလိမ့်မည်
အမူးပြေအောင် သံပရာရည်ဖျော်သောက် မည့် အစား အမူးလွန်ပြီး အိပ်ပျော်အောင် မိုင်ကုန်ကစ်မည့် သူများ က မနည်းမနော ။
အစက်အပြောက်မှသည် အစွန်းအထင်းသို့မသိမသာ တစ်မျိုး သိသိသာသာ တစ်မျိုး ကူးပြောင်းသွားလေတော့ သည် ။
“သင့်လက်ထဲတွင် သံပရာသီးတစ်လုံး ရှိနေသည်ဆိုလျှင် သံပရာရည်တစ်ခွက် ဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်ပါ”
အမှန်သည် ကျွန်တော်တို့နှင့် နေထိုင်ခဲ့ပါသလား။
နေထိုင်ခဲ့သော ကျွန်တော်တို့သည် အမှန်ပါလား။
ခွင့်လွှတ်ပါ အချစ်ရယ်။ အဲသလိုနဲ့ကိုယ်ဟာ...မတရားပောာတဲ့ဆရာ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
( 9/2/2012 - Thursday 1:17 am )
Posted by Sunday Music at 11:40 AM
အပောာင်းတွေပျောက်သွားတာတွေ့ ရတယ် ။
ရှာတွေ့ သွားသူတွေကလည်း နည်းနည်းရယ်
အင်အားကြီးမှ လွတ်မြောက်နိူင်မယ်ဆိုတဲ့ ၀ါဒီဖန်တီးသူ
သူကိုယ်တိုင်ပေးဆပ်ခဲ့ရတာက အသွေးနဲ့ အသားနဲ့။
ပညာရှင်အနည်းစုလည်း လွတ်ရာကျွတ်ရာ ရွှေ့ ကုန်ပြီ
သတ္တိကောင်းတဲ့သူတွေကလည်း အနာဂတ်ကို သွေးတိုးစမ်းနေတုန်း
ကြုံတဲ့ သံသရာမှာဖြစ်သလိုဖန်တီးတဲ့ ပေါ့ပျက်ပျက် အရသာက
ဘယ်သူမှ သိပ်မစိုးရိမ်ကြတော့ပါဘူး ။
အဆိပ်ငွေ့ တွေလွှမ်းနေတဲ့ ကောင်းကင်ကြီးလည်း ငယ်ငယ်ကလိုမလှတော့ဘူး
အပြာရောင်သန်းနေတဲ့ ပင်လယ်ကြီးလည်း ငယ်ငယ်ကလိုမလှတော့ဘူး
ကောက်ကွေးနေတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေလည်း ငယ်ငယ်ကလို မဖြောင့်တော့ဘူး
အာပာာရတွေချို့ တဲ့သွားသလို ရွှေးစရာတွေမပေါတော့ဘူး ။
တကယ် အချိန်နည်းနေလို့ ပါ ။
တနင်္ဂနွေ ဂီတ ( 5/2/2012 - sunday )
Posted by Sunday Music at 7:03 AM
လော လော ဆယ်
ဘယ်သူတွေ ဘာတွေကြိုက်နေလည်း ကိုယ်လည်းမသိ
ကိုယ်မှန်ရင် တဇောက်ကန်းက တစ်ပြားမှ မလျှော့။
ဖြစ်ဖြစ်ချင်း လိုက်ယောင်ချင်တာကလည်း ကိုယ့်ရဲ့ အကျင့်
ပြင်တော့ ပြင်ပါတယ် .. ပြန်ပြန်ပျက်သွားလို့လိုက်လိုက်ဆယ်ရတာလည်း အမောပဲ
ဖြစ်ချင်ရာဖြစ်ဆိုပြီး လွှတ်ထားလို့ ကလည်း မဖြစ်
ဘ၀ ကပျက်မှာလေ ။
ဒင်းတို့ ကလည်း (လုံးဝ) ကိုစောင့်တာမပာုတ်
ဘယ်ထူးမလဲ လိုက်ရတော့ တာပေါ့ ။
နည်းနည်းတော့နောက်ကျနေပြီ
သူများအမှားလည်း မပာုတ်ပါဘူး ။
အပြစ်မရှိ အပြစ်ရှာတယ်လို့အပြောကခံရသေး
သူ့ အတွက်ဆို ပြောပါတယ်
ငါ့နောက်ကပဲ လိုက်ခဲ့ပါလို့။
ငါလည်း ပုထုဇဉ်မို့ 
မခံနိူင်လဲ တစ်ကိုယ်ကောင်းကဆန်နေတက်လို့။
ထိန်းမရ သိမ်းမရတွေဖြစ်မှ အမေကယ်ပါ အဘကယ်ပါနဲ့ 
ကယ်ပါ တွေတောင် သူ့ လောက် ကယ်ပါမလုပ်နိူင်ဘူး
အသက်ရှူကြပ်တာ မရှိဘူး ။
ငါဆက်ပြောရင် မကောင်းတက်လို့ 
ဒီလောက်နဲ့ ပဲ ရင်နာပါရစေ ။
( 25/1/2012 . 1:48 A.M )
Posted by Sunday Music at 11:28 AM
ဘ၀မှာသင်ခန်းစာ ယူတက်တဲ့သူတွေကိုလေးစားရင်း နေတက်ထိုင်တက်အောင်နေတက်သွားတယ်
ဘ၀မှာဖြစ်ကတက်ဆန်း နေတက်တဲ့သူတွေကိုဆင်ခြင်ရင်း ကိုယ်တိုင်မဖြစ်တော့အောင်ပုံသွင်းတယ်
လုပ်နေတဲ့အရာတိုင်း ဘာကြောင့်လဲဆိုတာကို ပြန် ပြန်စဉ်းစားတက်လာတယ်
ပြောနေတဲ့စကားတိုင်း ဘာအတွက်လဲဆိုတာ ပြန်ချင့်ချိန်တက်လာတယ်
အချိန်အားရင် အားသလို စာအုပ်တွေလဲဖတ်တက်လာတယ်
အချိန်အားရင် အားသလို ရှင်ဆေကိန္တတရားခွေတွေလည်းနားထောင်တက်လာတယ်
သိပ်ကြိုက်ခဲ့တဲ့ ၀ါသနာတွေကိုမျက်ကွယ်ပြုပြီး အနာဂတ်အတွက်ဘေးမျဉ်း တားတက်လာတယ်
သိပ်ကြိုက်ခဲ့တဲ့ အဆိုတော်တွေကိုခဏမေ့ပြီး ရည်မှန်းချက်နဲ့ မိတ်ဆွေဖွဲ့ တက်လာတယ်
အရင်က အတန်းမတက်ပဲတနေကုန်ဖဲရိုက်ပေမဲ့ မနေ့ ကတော့ ပိုက်ဆံတွေချန်ထားတက်လာတယ်
အရင်က မပြောမဆိုခိုးခဲ့ဘူးတဲ့အမေ့ပိုက်ဆံအိတ်ကို သူပျောက်နေတဲ့ အခါဝိုင်းရှာပေးတက်လာတယ်
အရင်က မိုးလင်းမိုးချုပ်အိမ်ပြန်မအိပ်ခဲ့ပေမဲ့ ခုတလောအိမ်မှာပဲအချိန်ပေးပြီးနေတက်လာတယ်
အတိတ်ထဲက နာကျည်းစရာတွေကို အနာဂတ်အတွက် သင်ခန်းစာယူတက်လာတယ်
အတိတ်ထဲက ပျင်းရိမှုတွေကို အနာဂတ်အတွက် ၀ီရိယထားတက်လာတယ်
ကျန်နေသေးတဲ့ အချိန်တွေကို တန်ဖိုးရှိရှိနေထိုင်ချင်တယ်
ကျန်နေသေးတဲ့ နေ့ ရက်တွေကို အကျိုးရှိရှိအသုံးချချင်တယ်
ရင်ဘတ်ရှေ့ မှာအများကြီး တန်းစီရပ်နေတဲ့ နောက်ကျောတွေကိုလဲ ကျော်တက်ချင်သေးတယ်
ဘေးနှစ်ဘက်မှာအကာမရှိ ချောက်သာရှိတဲ့ လှချင်တိုင်းလှနေတဲ့လမ်းမကြီးပေါ် တန်းစီပြီးလျှောက်ရတာခြင်းအတူတူ
ရှေ့ ကနောက်ကျောတွေနောက်ပဲ ခြေဖ၀ါးထပ်ချင်တယ်
လမ်းဆုံးအောင်လျှောက်တဲ့သူတွေ ပြုံးပြသလို ကိုယ်တိုင်လည်းအနောက်က ရင်ဘတ်တွေကိုပြူံးပြချင်တယ်
ပန်းတိုင်ကို ငါထိပ်ဆုံးမရောက်ပေမဲ့ ပန်းတိုင်ကိုရောက်သူတိုင်းလိုလက်မြှောက်ပြီး အောင်ပွဲခံချင်တယ်
့ပြင်ဆင်မှုပာာ အနာဂတ်အတွက်အကောင်းဆုံးဇာတ်သိမ်းခန်းပဲလို့စာအုပ်တစ်အုပ်မှာဖတ်ခဲ့ဖူးတယ်
ဘေးမျဉ်း ကတော့ တားပြီး ပြီ ...
ုပြင်ဆင်မှူကိုစလုပ်ဖို့ အတွက် ဘယ်ကဘယ်လိုစပြင်ဆင်ရမလဲဆိုတာသိဖို့တော်တော်ပြင်ဆင်ရအုံးမယ်
အ...ဝေး...ကြီး...လို...နေ...သေး...တဲ့...ငါ ........... ........... ..............
တနင်္ဂနွေ ဂီတ (20.1.2012 / 3:58 AM )
Posted by Sunday Music at 1:43 PM
ထွေထွေထူးထူး နေ့ တော့ မပာုတ်ခဲ့ပါဘူး ...
ဒီနေ့ ကို ငါပျော်တယ် ။
မနက်နိူးလို့ ဖုန်းဆက် ရန်ဖြစ်ခဲ့တာလဲ လူကြားမကောင်းပေမဲ့ ငါပျော်တယ် ။
သေချာမချိန်းဘဲ ငါ့ကျူရှင် လှေကားထိပ်လေးမှာ အကြာကြီးထိုင်စောင့်ပေးနေတာမြင်တော့ ငါပျော်တယ် ။
နင့်ကိုစိတ်ဆိုးနေလို့မျက်နှာတင်းထားပေမဲ့လဲ ငါ့လက်ကိုလာလာစွဲဆုပ်ထားလို့ငါပျော်တယ် ။
Donut ဆိုင်ထဲ ငါမပြောပဲ ထိုင်ခုံနေရာ နင်ရွေးတက်တာကိုလည်း ငါပျော်တယ် ။
အမြင်ကတ်လို့ခုံကိုခြေထောက်နဲ့ တွန်း ... မသောက်ရသေးတဲ့ ငါ့ကော်ဖီခွက်ကြီး ဗွမ်းကနဲမှောက်ကျသွားတာလည်း ငါပျော်တယ် ။
ငါအအေးငတ်မှာဆိုးလို့မပြောမဆို နောက်တစ်ခွက်သွားယူပေးတာလည်း ငါပျော်တယ် ။
ငါ့ဖုန်းငါ ကလိနေတုန်း.. အလိုက်တသိနဲ့wifi password ယူပေးတာလည်း ငါပျော်တယ် ။
Exchange ရုံးကပေးလိုက်တဲ့ အထုတ်အကြီးကြီးကို ပုခုံးပေါ်ထမ်းပြီး
မိန်းမခိုးလာသလိုဂိုက်နဲ့ နင်နဲ ငါဆူးလေမြို့ လည်လမ်းလျှောက်တာလည်း ငါပျော်တယ် ။
ဆိုင်ကယ်ပေါ်မှာအထုတ်ကြီးထမ်း နင့်အိမ်နောက်ကို နင့်နောက်ကလိုက်ကတာလည်း ငါပျော်တယ် ။
လေအတိုးမှာ မျက်စိထဲဝင်ဝင်လာတဲ့ပိုးကောင်ပျံတွေကို ပွတ်ရင်း နေ၀င်နေတဲ့ဆည်းဆာအလှကိုကြည်မိလိုက်ရတာလည်း ငါပျော်တယ် ။
လမ်းကြမ်းလို့ဆိုင်ကယ်ဘီးအဆောင့်မှာ ဖင်မြှောက်မြှောက်တက်သွားတာကိုလည်း ငါပျော်တယ် ။
လက်အံသေလို့ ခြေထောက်ကကျင် ... အိတ်ဇောပိုက်နဲ့ ခြေမျက်စိ ပူးတွဲကပ်လို့အရေကြည်ဖုလေးထသွားတာလည်း ငါပျော်တယ် ။
အိမ်နောက်ဖေးဝင် ခြေထောက်ဝင်ဆေး လောလောလတ်လတ် ဒဏ်ရာလေးကို သွားတိုက်ဆေးလူးပေးမယ်လို့ နင်ပြောတော့ငါပျော်တယ် ။
ခြေထောက်သုတ်ပြီး အိမ်ထဲဝင် နင့်အမေနဲ့ပက်ပင်းမတိုးခဲ့လို့ငါပျော်တယ် ။
ကော်ဖီထိုင်အသောက် ဆိုင်ကယ်ပြန်အရောက်မှာ စိတ်ပူတဲ့မျက်နှာလေးနဲ့ ကောင်းကောင်းပြန်လို နင်ပြောလိုက်တာကိုလည်း ငါပျော်တယ် ။
အပြန်ခရီး...ဆိုင်ကယ်အစီးမှာ ပိာုတွေးဒီတွေး ကြယ်လေးကြွယ်ပါစေလို့ 
ဆုတောင်းပြီး ကောင်းကင်မော့ကြည့် ရတာကိုလည်း ငါပျော်တယ် ။
သင်္ဘောပေါ်က ၁၀တန်ပေးထိုင်ရတဲ့ ခုံမှာ ဒူးချိတ်ပြီးထိုင်နေတုန်း ကောင်းကင်ကိုထက်အကြည့်တကယ်ကြီး ကြယ်ကြွေကျသွားတာကို မြင်လိုက်ရလို့ဆုတောင်းခဲ့တာလည်း ငါပျော်တယ် ။
ရန်ကုန်ဘက် ကမ်းပြန်ကပ်လို့ဘောတံတားအစပ် အပေါက်ဝကဘယ်သူမှမဆင်းခင် ငါအရင်ခုန်ပြီး ပြေးဆင်းလိုက်ရတာလည်း ငါပျော်တယ် ။
လိုင်းကားပေါ်မှာ နားကြပ်ကြီးတပ် ဘယ်ဆော်မှလိုက်မငမ်းပဲ မိန့် မိန့် ကြီး အိပ်ငိုက်လာခဲ့တာလည်း ငါပျော်တယ် ။
မိုးလင်းကမိုးချုပ် အပြင်မှာလျှောက်လုပ် ... ခေါင်းလောင်းကြိူးဆွဲလိုက်တာနဲ့ မဆူမပူပဲ တံခါးလာဖွင့်ပေးတဲ့ အမေ့ကိုအမြင် အမောပြေခဲ့တာလည်း ငါပျော်တယ် ။
အဖေအိပ်တော့ဖုန်းခိုးဆက်.... လိုင်းမကောင်းတဲ့အထဲ နင်နဲ့ ငါ မရမက အပြစ်ပြောရင်းဖုန်းကျသွားတာလည်း ငါပျော်တယ် ။
မီးပျက်လို့အခန်းထဲမှောင်မှောင်မဲမဲထိုင်ရင်း ..လက်တော့ကိုဖွင့် ဒီနေ့ အကြောင်းပြန်စဉ်းစားပြီး မမြင်မစမ်း တစ်လုံးချင်း စာရိုက်နေရတာလည်း ငါပျော်တယ် ။
တနင်္ဂနွေ ဂီတ (17.1.2012) / 1:35 AM
Posted by Sunday Music at 11:45 PM
သူ့ အတွက် စာအုပ်မလိုပါ
သူ့ အတွက် တန်ဖိုးကြီးစကားလုံးစုများသာလိုသည် ။
သူ့ အတွက် ကဗျာမလိုပါ
သူ့ အတွက် ရိုက်ချက်ပြင်းသော စကားလုံးများသာလိုသည် ။
သူ့ အတွက် ပန်းချီကားမလိုပါ
သူ့ အတွက် ပာန်ချက်ကောင်းသော စုတ်ချက်များသာလိုသည် ။
သူ့ အတွက် သီချင်းမလိုပါ
သူ့ အတွက် မျောလွင့်သွားမည့် ဂီတသာလိုသည် ။
သူ့ အတွက် ကချေသည်မလိုပါ
သူ့ အတွက် ထောင့်ချိုးညီသောရုပ်သေးရုပ်သာလိုသည် ။
သူ့ အတွက် ဘာမှမလိုပါ
သူ့ အတွက် အနုပညာသာလိုသည် ။
တနင်္ဂနွေ ဂီတ ( 12 January 2012 )
Posted by Sunday Music at 10:33 AM
ထိုစဉ်အချိန်က လောက၏ ဒေါင့်ချိုးတစ်နေရာမှာ ...
ကြယ်ကြွေချိန်ကို မြင်ယောင် မျှော်လင့်နေချိန်ဖြစ်ပါသည် ။
အပြာရောင် တလင်းလင်းလွင့်နေသော စကြာဝဋာမှာ ...
တိမ်တစ်ပွင့်အတွက် နေရာမရှိခဲ့ ။
သူကိုယ်တိုင်ပျောက်ဆုံးခဲ့ ရ၏ ။
သူ့ ကိုယ်သူမတွေ့ ။
သူ လမ်းဆက်လျှောက်ခဲ့ရသည် ။
နှင်းဆီပွင့်သောအိပ်မက်တို့ မက်၏ ။
အရောင်တစ်မျိုးဖြင့်ရဲရဲနီနေသည် ။
သူသည် ' အညတရ ' မပာုတ် ။
သူ့ အကြောင်းကို သူဘာမှမသိ။
သူ့ အကြောင်းကို ...
ဘယ်သူကမှလည်း ဘာမှမသိ ။
ပို စိတ်မနှံ့ သော လူငယ်တစ်ဦးအဖြစ်
သူ ..သူ၏မြို့ ကလေးကို
စွန့် ခွာသွားရမည့်အချိန်တိုင်ခဲ့ပြီ ။
သနပ်ခါးရနံ့မွှေးမြရင်း
အနောက်လေစီးတသုန်သုန်မှာ လှပနေဆဲဖြစ်၏ ။
သူ့ ရှေ့ မှာ သင်္ဘောတစ်စီးသည်
ဥသြဆွဲသံကြီးကို အန်ထုတ်တော့မည် ။
ကောင်မလေးက လိုက်ပါပို့ ဆောင်သူကို
လက်ဝှေ့ ယမ်းကာ နူတ်ဆက်၏ ။
သင်္ဘောသည် သူ့ ကိုယ်လုံးကြီးကို တံခါးဖွင့်ပေးသည် ။
မြို့ ကလေးကို ကျောခိုင်းလျက် ... ။
သနပ်ခါးရနံ့ ရှုမိသော နှာခေါင်းမှာ
အသက်ရှုကြပ်ပါတော့ သည် ။
သနပ်ခါးရှိရာကို နမ်း၏ ။
" ဖြန်း "
ပါးတစ်ဖက် လည်ထွက်သွားသည် ။
မမြင်ရသော မီးတို့ ဖြင့်အဆင့်ဆင့်တောက်လောင်ခဲ့သည် ။
ညနေပိုင်းရဲ့အမွန်အမြတ်တွေ ပြာကျ ။
လူငယ် .... သနပ်ခါး အဆိပ်သင့်ခဲ့ ပြီ ။
အရာရာကို ဥပေက္ခာထားနိူင်ဆဲ ။
တိမ်တစ်ပွင့်အတွက် နေရာမရှိခဲ့။
သူ့ ကံကြမ္မာက ထိုသို့ မြဲပင် ...
မြစ်ကမ်းနားကို သူသွား၏ ။
မြစ်တစ်စင်းမပာုတ်သည့် တိုင် ထိုရေစီးလို သူလိုက်မျောခဲ့သည် ။
သူမမေ့ နိူင် ။
သူ သတိရသော ခုလိုချိန်မျိုးမှာ
အတိတ်က သူ့ ဘ၀ကို အလျားလိုက်ဝါးမြိုသည် ။
သူ့ ရင်ခွင်သည် ...
မမြင်ရသောမီးတို့ ဖြင့်အဆင့်ဆင့်တောက်လောင်သွားပြီ ။
သနပ်ခါးရနံ့ ကို သူမျှော်လင့်ဆဲ ။
ကမ္ဘာပေါ်မှာမရှိသော အရောင်တစ်မျိုးဖြင့်ရဲရဲနီနေဆဲ ။
လေထဲမျောသွားသော သနပ်ခါးနံ့ ကို လေထဲမျှောရင်း သူလိုက်၏ ။
သင်္ဘောကြီးကတော့ အရာရာကို ဥပေက္ခာပြုထားဆဲ ။
ညနေပိုင်းရဲ့အမွန်အမြတ်တွေ ပြယ်လွင့်။
လူငယ် ... သနပ်ခါးအဆိပ် သင့်ခဲ့ ပြီ ။
သူ့ အကြောင်းကို သူကိုယ်တိုင်ဘာမှ မသိ
ထို့ ကြောင့်...
သူ့ ကိုလိုက်ပါပို့ ဆောင်သူမရှိ ။
ထိုကြောင့် လက်ဝှေ့ ယမ်း နူတ်ဆက်ပြစရာမလို ။
သူ့ အတွက် မလို ။
ထိုသို့ ဖြင့်...
ထိုဖြစ်ရပ်ကို မသိသော သနပ်ခါးလိမ်းသူက ..
ထိုဖြစ်ရပ်ကို တစ်ဆင့်ပြန်သိမဲ့ အချိန်မှာ
သုံးနှစ်ကျော် ကွာပာနေပေလိမ့်မည် ။
အံ့ သြခြင်း ..ကြေကွဲခြင်း .. တို့ နှင့်အတူ
လမ်းကို တွေ့ သည် ။
သူ့ကိုယ်သူ မတွေ့။
သူ လမ်းဆက်လျှောက်ခဲ့သည် ။
သနပ်ခါးရနံ့ကို သူ ရသည် ။
သနပ်ခါးလိမ်းသူကို သူ မတွေ့။
၀ိညာဉ်တစ်ခုလို အနံ့ ရသည်
သူ မတွေ့။
သူ ငိုသည် ။
သူ ချောက်ခြားသည် ။
ရနံ့ များ သူ့ နောက်ကို လိုက်လာ၏ .. ( ထိုသို့သူထင်သည် ။ )
သူ့ကိုဆက်သွယ်၏ ။ .. ( ထိုသို့သူထင်သည် ။ )
သူ့ ကို ကလဲ့စားချေလိမ့်မည် ။ .. ( ထိုသို့သူထင်သည် ။ )
သူ့ ထံ မကြာမီရောက်လာတော့ မည် ။ .. ( ထိုသို့သူထင်သည် ။ )
ထိုသို့ ဖြင့်...
သူမ ကို ငါရင်ဆိုင်မှာပါ ..
ငါ့ကံကြမ္မာက ထိုသို့ဖြင့်ပင် ..
တနင်္ဂနွေ ဂီတ (5/ 1 / 2011 )
Posted by Sunday Music at 9:43 AM
အပိုင်းပိုင်း အပြတ်ပြတ် တစ်နေရာထဲ ဆက်နွယ်ထားလိုက်နဲ့ 
သုတေသီတွေတောင် ခေါင်းကုတ်နေဆဲ ။
အရောင်မတူတဲ့ နူးညံ့ ခြင်းမျိုးစုံနဲ့ 
စက်သွား တစ်ခုလို ပုံမှန်လည်ပတ်နေတယ်
စိတ္တဇလို့ ပြောဖို့ ကလဲ အခက်သား
နဂိုမွေးထဲက သူ့ ထိုက်နဲ့ သူ့ ကံ
လက်မတော့ ထောင်နိူင်တယ် ။
သူများထက်ပဲ နှိမ့် ကျတာလား
Monalisa ပန်းချီကားထဲက ပျောက်နေတဲ့မျက်ခုံးတစ်စုံကိုတော့ 
သူအရင် သတိထားမိလိုက်တယ် ။
တောင်ထိပ်ပေါ်ကနေ ခဲလုံးလေးတွေ အောက်ပစ်ချနေတယ်
Grand Canyon ချောက်နက်ကြီးထဲက Coffee ဘူးခွံ ကိုရော ဘယ်တော့ ပြန်ကောက်နိူင်မှာလဲ ။
အဲ့လို ဘ၀မျိုးရဖို့ အသေအလဲဆုတောင်းတယ်
( 1 :6) ကိုး...... ။
တနင်္ဂနွေ ဂီတ (3Janauary 2012 )
Posted by Sunday Music at 3:21 AM
အနယ်ထိုင်ခါစ အသံ ပုံဖော်ခါစ အမြင် နှစ်ခုရဲ့ ကြားစပ်ရောထွေးခြင်း
သွေးပောာင်း နဲ့ သွေးသစ် အတက်အဆင်း ဖလှယ်ခြင်း
အိမ်မက်အပောာင်း ကို ရည်ရွယ်ချက်အသစ်နဲ့အစားထိုးခြင်း
ပိာုက်ဒရိုဂျင် နဲ့ အောက်စီဂျင် နေရာရွေ့ ပြောင်းခြင်း
ပြောင်းလဲခြင်းတွေ ဆက်တိုက်ဖြစ်နေတဲ့ အာရုံထဲ
ဆဋမအာရုံ တစ်ချက်.... ၀င်းကနဲ ...လက်ကနဲ ....
ဒေါသတွေနဲ့ အပြိုင် ပြိုဆင်းလာတဲ့မျက်နှာပြင်နှစ်ခု
ပူးတွဲမလိုလိုနဲ့ဆန့် ကျင်ဘက်တွေချည်း ..။
အနီးကပ်ရှိလျက်နဲ့ ဘယ်တော့ မှမမြင်ခဲ့ ရတဲ့ အစိုင်အခဲ နှစ်ခု ..
တာဝန်အသီးသီး တော့ကျေပါရဲ့ ... ။
ကြားထဲပိတ်ကာထားတဲ့ အရာသာ စေ့စပ်မှုမရှိခဲ့ ရင် ... ...
လွဲရချည်ရဲ့... ။
ဘာကြောင့်နဲ့ ဆက်ရှင်ရမည် မသိသေး
လူမသိသူမသိ ကြား လူမသိသူမသိအောင် ထုတ်ကြညိ့ ရင်း
အတွေးပေါင်း တစ်သောင်းနဲ့ ခြောက်ထောင် ... ။
စက်ဝိုင်းဗပိာုထဲက အလယ်မှတ် တစ်ခုလိ်ု
ဖြစ်နိူင်ချေ အစွန်းနှစ်ဖက်က 360ံ...
ဘယ်လိုမှ မရှာနိုင် ။
လေးထောင့်ကွက်ထဲက ကန့် လန့်် မျဉ်းနှစ်ကြောင်းလို
ဖြစ်နိူင်ချေ စတုရန်းကွက်က3ခု (သို့ မပာုတ်)4ခု ...
ဘယ်လိုမှ မရေရာနိုင် ။
ရာသီတွေလဲ ကျီစားပြန်တယ် ... ။
သံပတ်နဲ့ သွားတဲ့ အရုပ်လို
မျက်လှည့် ပြပွဲက ခိုဖြူလို
( ကြိုရှောင်လို့ ရရင် ရှောင်ချင်ပါရဲ့ ) ... ။
နောက်ဆုံးတော့ပွဲပြီးမီးသေ
အညိုရောင် ပြာ တွေလဲ သူ့ နေရာသူယူကုန်ကြပြီ
အသစ်ကပြန်စရှာရအုံးမည် .. ။
တနင်္ဂနွေ ဂီတ ( 12.12.2011 / 6:21 AM )
Posted by Sunday Music at 4:03 PM
Chaos Of Vacuum
ဘရာဇီး နိူင်ငံက လိပ်ပြာတစ်ကောင်ရဲ့အတောင်တစ်ချက်ခတ်ခြင်းက
(အမေရိကန်) မက်ဆာချူးဆက်ပြည်နယ်မှာ တော်နာဒို လေမုန်တိုင်းကျစေ ခဲ့တယ် .. ။
ကျိန်စာလေလား. ... လေပာာနယ်လား ..
လေလှိုင်းနူန်း နဲ့ ဆွဲငင်ခြင်းအကြောင်းတွေ
လက်လှမ်းမမှီလောက်ပါဘူး ဖန်ပြန်အက်ကြောင်းထပ် သဘောတရားတွေ .. ။
အခြေခံကျတဲ့(စနစ်တကျ ဖြစ်တည်မှု) ပာာ ပုန်းကွယ်နေဆဲ ..
နားမလည်သေးပါဘူး အလင်းပြန်မော်လီကျူးတွေ .. ။
ခရမ်းရောင်အမှေးပါးနဲ့စွန့် စွန့် စားစား ထုတ်ပိုးထားတဲ့ပြဒါးရည် ..
ခြောက်သွေ့ ခြင်းတရားက တရားသေလွတ်မြောက်သွားတဲ့သစ်ရွက် (၂)ရွက် နဲ့ 
အိပ်စက်ခန္ဒာထဲ ပြန်ဝင်ခွင့်မရတဲ့ဝိညာဉ်ကြိုးတွေ .. ။
.. .. .. .. .. အားလုံးကတော့လေပာာနယ်ထဲမှာ .. .. .. .. .. တနင်္ဂနွေ ဂီတ (7.10.2011 / 5:30 AM)
Posted by Sunday Music at 3:43 PM
သေဆုံးသွားတဲ့မှတ်ညဏ်တချိူ့နဲ့ 
သတိရ တစ်ချက် မရ တစ်ချက် ..
အနာဂတ်ကို မထိတထိ ရန်စ ဖြစ်နေတယ် .။
ခြောက်ကပ်နေတဲ့နူတ်ခမ်းဖျားနဲ့ 
ရူးများသွား ပြီလား .။
ပဲ့ ကျိုးနေတဲ့လှေတစ်စင်းလို
ကမောက်ကမ နဲ့ချိနဲ့ နဲ့. ။
လမ်းကြောင်း ပြန်ပြောင်းဖို့ အတွက်
ကြိူးတော့ မပြတ်သေးပါဘူး ..။
တနင်္ဂနွေ ဂီတ (1.12.2011 )
Posted by Sunday Music at 8:17 AM
တစ်ခါတစ်ခါလှည့်ပြန်လာတဲ့ ဒီဇင်ဘာကို ဝိုင်အနီတစ်ခွက်ထဲ ထည့်ငှဲ့ ရင်ခုန်ခဲ့ဖူးသလား
သိပ်မသေချာတော့ တဲ့ အိပ်မက်တွေနဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြုံးမိတာတွေ များနေပြီ ..
နေဆီကို တည့်တည့် လျှောက်လှမ်းနေခဲ့ပြီးကာမှ ကိုယ့်ကိုယ်ကို နေကြာပန်းမှန်းသိလိုက်ရသူလို
အဝါကို နာကျင်စွာ ခါချနေချင်တတ်ခဲ့ ………….
အကြမ်းရေးခြစ်ထားပြီး အရောင်မထည့်ဖြစ်သေးတဲ့ ပန်းချီကားချပ်တွေလိုပဲ
နေ့ရက်တွေက အရောင်မစုံဘူး .. အဖြူ အမည်း ခပ်ကျဲကျဲ ကောက်ကြောင်းတွေနဲ့
နှစ်ပရိစ္ဆေတ ကြာလာတဲ့အခါ အဖြူကလည်း ရင့်အိုဝါရော်လာခဲ့ အနက်ကလည်း အုံ့ဆိုင်း မှိုင်းအို လာခဲ့
ဘာနဲ့မှ အသစ်ပြန်စလို့ မရတော့ဘူး ….
ဒီဇင်ဘာကို စောင့်နေခဲ့ဖူးတယ် …
မဖွင့်ပဲ ပွင့်ထွက်လာတဲ့ သက္ကရာဇ် အသစ်စက်စက်တွေ .. အလိုလို ဟောင်းအိုသွားတဲ့ ဒီဇင်ဘာတွေ..
ခေါင်းလောင်းတွေ တအားမြည်နေတယ် ..
သိပ်မောလွန်းလို့ ခဏလောက်ဖြစ်ဖြစ် အသက်ရှူရပ်ထားလိုက်ပါရစေ …
ခေါင်းလောင်းသံတွေက ဝင်သက်ထွက်သက်နဲ့ ငြိငြိနေတယ် …
ဘယ်တော့ နှင်းကျမယ်မှန်းမသိ .. ဘယ်တော့ ပန်းပွင့်မယ်မှန်းမသိ …
ဘယ်တော့ ပင်လယ်ရေခမ်းမယ်မှန်းမသိ ဘယ်တော့မှ ငါ့ကိုမိမယ်မှန်းမသိ …
ငါက ဒီဇင်ဘာတွေဆီ ပြန်ရောက်ဖြစ်တော့ဘူး ……….
တနင်္ဂနွေ ဂီတ ( 1.12.2011 )
Posted by Sunday Music at 3:48 AM
Anti-Hero - ကမ္ဘာကြီးကို ကယ်တင်ဖို့ထက် ကမ္ဘာကြီးကို ကယ်တင်ချင်နေသူကို ကယ်တင်ဖို့က ပိုခက်တယ်
သင်္ကြန် - ဒီလိုရက်တွေရောက်ပြီဆိုရင် အိမ်နဲ့ဝေးနေသူတွေ အားလုံးမရိုးမရွနဲ့ ဖြစ်နေကြမှာ အမှန်မဟုတ်ပါလား တနှစ်မှတစ်ခါ ကိုယ့်ရိုးရာနှစ်ကူးသင်္ကြန်ကို ပြန်လာပြီးဆင်နွဲချင်ကြတ...
မေမေ မသွားပါနဲ့.. - သူ့အသက်ငါးနှစ်…. “မေမေ.. မေမေ့စကားကို သားနားထောင်ပါမယ်။ မေမေ မသွားပါနဲ့..” မူကြိုကျောင်းရဲ့ ကျောင်းပေါက်ဝမှာ မေမေ့ခြေထောက်ကိုဖက်ပြီး သူငိုယိုတောင်းပန်တယ်...
စကားဝါမြေ ၊ အွန်လိုင်းစာကြည့်တိုက်
The more positive instruction you give , the more positive result you'll get.
2012 (c). Watermark theme. Powered by Blogger.